Trade Mako Kunyoresa - Mamirioni Maker
Nyika zhinji dzinoenzanirana nyika dzese
Kushanda kamwechete uye seti imwe yemari yekunyorera kuchengetedzwa kusvika kumatunhu zana nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe.
Inochengetedza nguva nemari.
Inosanganisira nhengo dzinomiririra kupfuura 80% yekutengeserana kwepasi rose.
Tonga uye uvandudze mamakisi ako kuburikidza neimwe centralized system.
Zvatinoita Kumbira Quote
Yemahara yeChiratidzo Chekutsvagisa mune nyika dze119 nematare. Unogona kutsvaga neTrademark Name, Inonyorera zita kana Nhamba.
Dzivirira kudzimwa kweiyo yako yakanyorwa trademark, nguva nenguva faira kuvandudzwa kwechiratidzo chako.
Sevhisi yedu inokubvumidza kuti uone maitiro ekutengesa (ma) mune ino ndima yekushambadzira, zvakare yako yakanyoreswa kana yakasarudzika trademark kuve nechokwadi chekudzivirira kweyekutengesa (s) kwako.
Yedu Trademark Transfer masevhisi anobatsira iwe kupa uye kutamisa zvinhu zveMutengesi kune mumwe munhu kana chinzvimbo.
Isu tinobatsirawo iwe kuisa faira inopikisa iyo inowedzera mikana yako yekubudirira, uyezve, chero chiito chero chipi zvacho kana zvichidikanwa chengetedza kuchengetedza chiratidzo chako.
Hofisi yekubvaAF AfghanistanAG Antigua naBarbudaAL AlbaniaPAAustriaAU AustraliaAZ AzistaniBA Bosnia naHerzegovinaBG BulgariaBH BahrainBN Brunei DarussalamBQ Bonaire, Sint Eustatius naSabaBT BhutanBW BotswanaBX BeneluxYAKATAURWA naBelarusCH SwitzerlandCN ChinaCO ColombiaCU CubaCW CuraçaoCY KuproCZ Czech RepublicDE GermanyDK DenmarkDZ AlgeriaEE EstoniaEG EgipitaEM European UnionES SpainFI FinlandFR FranceGB United KingdomGE GeorgiaGH GhanaGM GambiaGR GreeceHR CroatiaHU HungaryID IndonesiaIE IrelandIL IsraeriMUIndiaIR Islamic Republic yeIranISIIziIT ItalyJP JapanKE KenyaKG KyrgyzstanKHakh CambodiaKP Democratic People's Republic of KoreaKR Republic yeKoreaKZ KazakhstanLA Lao People's Democratic RepublicLI LiechtensteinLR LiberiaLS LesothoLT LithuaniaLV LatviaMA MorokoMC MonacoMD Republic yeMoldovaINI MontenegroMG MadagascarMK Iyo yaimbove Yugoslav Republic yeMasedoniaMN MongoliaMW MalawiMX MexicoMZ MozambiqueNA NamibiaHAPANA NorwayNZ New ZealandOA African Intellectual Property Organisation (OAPI)OM OmanPH PhilippinesPL PolandPT PortugalRO RomaniaRS SerbiaRU Russian FederationRW RwandaSD SudanSE SwedenSG SingaporeSI SloveniaSK SlovakiaSL Sierra LeoneSM San MarinoST Sao Tome naPrincipeSX Sint Maarten (chikamu cheDutch)SY Syrian Arab RepublicSZ EswatiniTH ThailandTJ TajikistanTM TurkmenistanTN TunisiaTR TR TurkeyUA UkraineUnited States of AmericaUZ UzbekistanVN Viet NamZM ZambiaZW Zimbabwe
Mucherechedzo wekubatanidzwa, chiratidzo chechitupa, kana chiratidzo chekusimbisa
Mucherechedzo unogona kunge uri chiratidzo, izwi, dhizaini, kana mutsara unobatsira mumwe kusiyanisa mumwe mugadziri wezvinhu kubva kune mumwe. key identifier yekambani inoshandiswa pasi rese kana mune imwe nyika. Muenzaniso wakakurumbira ndeye Apple, iyo inomiririrwa neyakaomeswa apuro. Ichi chiratidzo hachina chero zvinyorwa asi mufananidzo wacho pachawo unongedzera kiyi weApple.
Mumwe Muenzaniso Wakasimba: McDonalds` chiratidzo ndeye goridhe 'M' iyo inozivikanwa pasi rose nevanhu vemazera ese kubva nguva refu, ndiko kuti, 1955.
Uyezve, mune akawanda mamiriro ezvinhu, kutengeserana / sevhisi zviratidzo zvinogonawo kusanganisira mavara, mimhanzi uye kunhuhwirira. Semuenzaniso, Coke anozivikanwa mucherechedzo anozivikanwa neari tsvuku uye chena mavara kusanganisa.
Ndeapi matanho ekunyoresa chiratidzo?
Kunyoresa chiratidzo chiratidzo chakareba kwazvo uye chinoda kuzadzikiswa kwakawanda, zvichienderana nenyika uko chiratidzo chevatengesi / vari kunyoreswa kunyoresa, isu kuMamirioni Makanzuru takamhan'ara maitiro matatu matanho makuru:
Nhanho 1 - Chiratidzo cheChiratidzo
Munguva ipi neipi yekudzidza yeChiratidzo, isu tinotsvaga zvakadzama kuti tione kuti chiratidzo chakafanana (kana chero rudzi rwechiratidzo chakafanana) hachina kunyoreswa parizvino. Ongororo inoitwa kuona kuti kunyoreswa kwakatumirwa kwakaringana kuwana chiratidzo. Iko kunogara kune chidzidzo chakazara kwazvo chinoitiswa neane ruzivo Intellectual Property gweta uyo anogadzirira mushumo wakazara pamusoro pekwaniso yekubudirira kunyoresa pamwe chete nezvake / mazano ake.
Nhanho yechipiri - Yechiratidzo Chekunyoresa Chikumbiro
Iyo Trademark Kunyoresa Chikumbiro inosanganisira kugadzirira uye kusefa kwechiratidzo chekutengesa nemutungamiriri weInternet Property nehunyanzvi. Muongorori anobva kuTrademark Office anoongorora chikumbiro uye anokurudzira kunyorera kuti aenderere pakudhindisa chikamu, kana muongorori anogona zvakare kupokana neruzivo rwuri muchiridzwa. Incase, yedu yomuongorori inoda kunyorera, iwe unozoziviswa nekuudzwa nezve chimwe chiitiko, kuti uenderere mberi, kana chiratidzo chechiratidzo chichienda kuchikamu chinotevera, ziviso yeruzhinji yeiyo trademark inoshambadzirwa kwenguva ingangoita mwedzi mitatu kupa vamwe mukana wakakwana wokupokana nenzira yekunyoresa maitiro. Kana nguva yekushambadzira yapfuura uye zvese zvinopesana zvikagadziriswa, kunyoreswa kwevatengesi kunogamuchirwa.
Nhanho 3 - Kunyoresa Chitupa
Iyi nhanho inosiyana nyika nenyika. Haasi nyika dzese dzinobhadharira setifiketi kana chikumbiro chave chagamuchirwa asi nyika zhinji dzinobhadhara mari yepamutemo yekupihwa chitupa. Kana mari yacho yabhadharwa, zvitupa zvehurumende zvakapihwa Muzvinonyoresa Setifiketi zvinotumirwa kwauri uye chiratidzo chinonyorwa mumanyorero sewakanyoreswa, nekudaro, ichipa kodzero yepamutemo kumuridzi weiyo trademark kuti ashandise chiratidzo che ® kunze kwekutengesa.
Bonaire, Sint EUSTATIUS uye Saba
Islamic Republic yeIran
Yaimbova Yugoslav Republic yeMasedonia
Sint Maarten (Dutch chikamu)
Kana iwe uri kutarisira kweAccounting uye Auditing Services mune chero nyika, iyo isina kunyorwa pane webhusaiti yedu ndapota taura nesu zvakananga ne-e-mail.
info@millionmaker.com Kana kudana Austria + 43720883676, Armenia + 37495992288, Canada + 16479456704, Poland + 48226022326, UK + 442033184026, USA +19299992153
Zvishandiso zvepasi rese zvinotongwa zvoga neChibvumirano.
Mari inotevera ichabhadharwa uye ichavharidzira makore gumi:
Mari yekutanga (Chinyorwa 8 (2) (a) cheChibvumirano)
apo pasina kubereka kwechimedu mune ruvara
ipo chero kubereka kwemakona kuri mune ruvara
Mari yekuwedzera yekirasi yega yega yezvinhu nemasevhisi anopfuura matatu makirasi (Chinyorwa 8 (2) (b) cheChibvumirano)
Mari yekuwedzera yekusarudzika kwega yega yakasarudzika Contracting State (Chinyorwa 8 (2) (c) chechibvumirano)
Zvishandiso zvepasi rese zvinotongwa chete neProtocol
Mari yekutanga (Chinyorwa 8 (2) (i) cheProtocol)
Mari yekuwedzera kune yega yega kirasi yezvinhu nemasevhisi anopfuura matatu makirasi (Chinyorwa 8 (2) (ii) cheProtocol), kunze kwekunge maContracting Parties ane chekuita nemari yemumwe (ona 2.4, pazasi) inobhadharwa yakasarudzwa (ona Chinyorwa 8 (7) (a) (i) yeProtocol)
Mari yekuwedzera yekumisikidza Bato rega rega reContracting Party (Chinyorwa 8 (2) (iii) cheProtocol), kunze kwekunge iyo Contracting Party iri yeContracting Party maererano nemubhadharo wemunhu (ona 2.4 pazasi) (ona Chinyorwa 8 (7) (a) (ii) cheProtocol)
Mubhadharo wega wega wekugadzwa kwega roga rakasarudzwa Chibvumirano Party maererano iro mubhadharo wega (panzvimbo pemubhadharo unobatanidzira) unobhadharwa (ona Chinyorwa 8 (7) (a) cheProtocol) kunze kwekunge iyo yakasarudzwa kondirakiti Party (zvakare) neChibvumirano uye Hofisi yekubva kune Hofisi yeNyika yakasungwa (zvakare) neChibvumirano (maererano neiyo Party yekuConstitution, mari inobatanidzwa inobhadharwa): iyo huwandu hwemubhadharo wega unogadziriswa nemumwe Kondirakiti Party ine hanya
Zvishandiso zvepasi rese zvinodzorwa nezvose zviri zviviri Chibvumirano uye Protocol
Mari inotevera inobhadharwa uye ichavhara makore gumi
Mari yekuwedzera kune imwe neimwe kirasi yezvinhu uye masevhisi anodarika matatu makirasi
3.3 Mari yakaringana yekudanwa kwega roga rakasarudzwa Chibvumirano Party maererano iro rairo risingabhadharwe (ona 3.4, pazasi)
Mubhadharo wega wega wekugadzwa kwega roga rakasarudzwa Chibvumirano Party maererano iro rinobhadharwa munhu mumwe neumwe (ona Chinyorwa 8 (7) (a) cheProtocol), kunze kwekunge iyo yakasarudzwa Kondirakiti Party inyika yakasungwa (zvakare) nechibvumirano uye Hofisi yekubva iOffice yeNyika yakasungwa (zvakare) neChibvumirano (maererano neiyo Party yekuConstitution, mari inobatanidzwa inobhadharwa): huwandu hwemubhadharo wega unogadziriswa neInternet Party inobatanidzwa.
Zvisirizvo zvine chekuita nekugoverwa kwezvinhu nemasevhisi
Iyi inotevera mari inobhadharwa (Mutemo 12 (1) (b)):
Iko izvo zvinhu uye masevhisi asina kukamurwa mumakirasi
Iko kusarudzika, sekuonekwa muchikumbiro, kwetemu imwe kana anopfuura zvisirizvo zvakapihwa kuti, panowanikwa mari yose pasi pechinhu ichi maererano nechikumbiro chepasi rose chiri pasi pe150 maSwitzerland, hapana muripo uchabhadharwa
Dhizaina inotevera kunyorwa kwenyika dzakawanda
Mari inotevera ichabhadharwa uye ichavhara nguva iri pakati pezuva rinoshanda rehumambo uye kupera kwenguva iripo yekunyoreswa kwenyika:
Mari inokwenenzverwa yeimwe neimwe yakasarudzwa Inosungirwa Party inoratidzwa mukumbiro imwechete iyo imwe mari isiri kubhadharwa maererano neiyo yakasarudzwa kontrakiti Party (ona 5.3, pazasi)
Mubhadharo wega wega wekugadzwa kwega roga rakasarudzwa Chibvumirano Party maererano iro mubhadharo wega (panzvimbo pemubhadharo unobatanidzira) unobhadharwa (ona Chinyorwa 8 (7) (a) cheProtocol) kunze kwekunge iyo Musangano weConstitution wakasungwa (zvakare) nechibvumirano uye Hofisi yeConstitution Party yebato iri Hofisi yeNyika yakasungwa (zvakare) neChibvumirano (maererano neiyo Chechi Yechibvumirano, mari inobatanidzwa inobhadharwa): huwandu hwemunhu mubhadharo unogadziriswa neInternet kontrakiti Party ine hanya
Mari yekuwedzera, kunze kwekunge kuvandudzwa kwacho kuchingoitirwa chete kune Akamisikidzwa Mitezo maererano neupi muripo unobhadharwa (ona 6.4, pazasi)
Mari inokwikwidza kumunhu wese anosarudzwa Anokanzirana mubato uyo mumwe mubhadharo usingabhadharwe (ona 6.4, pazasi)
Yakawedzera kushandiswa kweiyo nguva yenyasha
Kuendeswa kwakazara kwekunyoreswa kwenyika
Kuenda kuchidimbu (kune zvimwe zvezvinhu uye masevhisi kana kune mamwe maConstitutioning Parties) kwekunyoreswa kwenyika
Kuganhurirwa kwakumbirwa nemuridzi anotevera kunyoreswa kwenyika dzakawanda, chero bedzi, kana kudzikiswa kuchikanganisa zvinopfuura chimwe chibvumirano Chebato, zvakafanana kune vese
Chinja muzita uye / kana kero yemubati uye / kana, apo iye akabata iri yepamutemo mubatanidzwa, kuisirwa kana shanduko mune zvinoratidza maererano neyepamutemo chimiro chemubati neUnited States uye, pazvinoshanda, nzvimbo yenzvimbo mukati Inyika pasi pemutemo iyo iyo yakanzi yepamutemo sangano yakarongedzwa kunyorwa imwe kana kupfuura nyika kunyorera kwairi kunyorwa zvakafanana kana shanduko ikakumbirwa nenzira imwe chete.
Kurekodha rezinesi maererano nekunyoreswa kwenyika kana kuchinjiswa kwekurekodha reisensi
Chikumbiro chekuti uenderere mberi kugadziriswa pasi peMutemo 5bis (1)
Ruzivo maererano nekunyoreswa kwenyika
Kugadzira rinobvumidzwa rinobviswa kubva kuInternet Rejista kunosanganisira kuongorora mamiriro ekunyoresa kwepasi rose (yakatsanangurwa yakatemwa dura), kusvika pamapeji matatu, kune peji rega rega mushure mechitatu.
Kugadzira rinobvumidzwa rinobviswa kubva kuInternet Rejista inosanganisira kopi yezvinyorwa zvese, uye nezvese zviziviso zvekuramba, zvakaitwa maererano nekunyoreswa kwenyika dzakawanda (yakapetwa rakaburitswa rakaburitswa), kusvika pamapeji matatu, kune imwe neimwe peji mushure mechitatu
Chipupuriro chimwe chete kana ruzivo rwakanyorwa, kunyorera nyika imwechete, kunyoreswa kwenyika imwe neimwe kana ruzivo rumwe chete rwunokumbirwa muchikumbiro chimwechete.
Kunyorazve kana kopi yekuparadzira kunyoreswa kwenyika dzakawanda, pane peji
International Bureau inemvumo yekutora mubhadharo, uyo unokwenenzvera huwandu hwayo, kuti mabasa aitwe nekukasira uye nemasevhisi asina kufukidzwa neChirongwa ichi CheMari.
Kune ezvekunyorwa kwenyika dzese dzakafemerwa nevanonyorera nyika yavo kwayakatangira Nyika Yakasimudzwa, zvichienderana nerondedzero yakagadzwa neUnited Nations, mubairo wekutanga unodzikiswa kusvika 10% yeiyo mari yakatarwa (yakatenderwa kune iyo iri pedyo nhamba yakazara). Mune zviitiko zvakadaro, mubhadharo wekutanga unosvika makumi matanhatu nemasere ekuSwitzerland (apo pasina kubereka iwo mucherechedzo mune ruvara) kana kusvika makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe maSwiss Francs (apo chero kubereka kwemucherechedzo kuri nemuvara).
Mari dzinobhadharirwa mune zvakaitika kuTrademark kurambwa neMasimba
Hapana kwese munyika, Trademark zviremera zvinodzosera mari, kana ivo vachiramba chiratidzo chechiratidzo chekunyoresa. Mari yemubhadharo weChikumbiro chedu Kunyoresa inosanganisira iyo yekubhadhara zviri pamutemo kutumira kunyoreswa kuTrademark Office (s), uyezve, mari yepamutemo yekudzokorora, kugadzirira uye kutevedzera zvaunoda. Izvi hazvidzorere.